Boqortooyada Eebbe (Qaybta 2), Kaniisadda Adduunka Ee Caalamka Switzerland (WKG)
Boqortooyada Ilaah <abbr> (Qaybta 2)
Tani waa qaybta labaad ee taxanaha 2-taxane ah oo uu Gary Deddo ka sheegayo muhiimadda laakiin inta badan si qaldan loo fahmay oo ku saabsan Boqortooyada Ilaah. Qaybta dambe, waxaan ku muujisay muhiimadda dhexe ee Ciise inuu yahay boqorka ugu sarreeya ee boqorrada iyo sayidkiisa ugu sarreeya xagga boqortooyada Ilaah. Maqaalka waxaan kaga hadli doonaa dhibaatooyinka haysta sida loo fahmo sida Boqortooyada Ilaah ay ku jirto halkan iyo hadda.
Joogitaanka Boqortooyada Ilaahay laba weji
Muujintii kitaabiga ahi waxay gudbineysaa labo wajiyood oo ay adag tahay in la heshiiyo: in boqortooyada Ilaah ay jirto laakiin sidoo kale mustaqbalka. Aqoonyahanada Baybalka iyo fiqiga ayaa inta badan qaatay mid kamid ah culeys gaar ahna siiya labada dhinac midkood. Laakiin 50-kii sano ee la soo dhaafay ama ka badan waxaa jiray heshiis ballaaran oo ku saabsan sida ugu wanaagsan ee loo fahmi karo labadan aragtiyood. Xaraashkaasi wuxuu la xiriiraa cidda Ciise yahay.
Wiilka Ilaah wuxuu ku dhashay bini-aadamka Maryantii bikradda ahayd qiyaastii 2000 sano ka hor, wuxuu la wadaagay jiritaankeenna bini aadamka wuxuuna ku noolaa adduunyada dembiga leh muddo 33 sano ah. Adoo ka duulaya dabeecadaheena bini aadamka bilowgii dhalashadiisa ilaa dhimashadiisa 1 tanina waa lagu daray, wuxuu noolaa dhimashadeenna ilaa sarakiciddiisa, ka dib jidh ahaan xagga jannada kor loogu qaaday maalmo yar oo uu dadka u muuqday ka dib; taas oo ah, wuxuu ku sii nagaaday aadamnimadeena, kaliya inuu ku laabto jiritaanka aabihiis iyo wada noolaanshaha kaamilka ah ee isaga la jira. Sidaas darteed, in kasta oo uu wali ka qaybqaato dabeecaddaheenna ammaanta aadanaha, haddana isagu ma joogo sidii uu ahaan jiray kii ka horreeyey u qaadnimadiisa. Jid ahaan, isagu kuma sii jiro Earth. Oo qalbi qaboojin kale, wuxuu u soo diray Ruuxa Quduuska ah inuu nala joogo, laakiin sidii maamul madax bannaan, isagu haatan ma joogo sidii hore. Si kastaba ha noqotee, wuxuu ballanqaaday inuu soo laaban doono.
Isla mar ahaantaana, nooca boqortooyada Ilaah waa la arki karaa. Runtii waxay ahayd "dhow" oo wax ku ool ahayd wakhtigii ciise. Waxay ahayd mid aad u dhow oo palp in u baahan jawaab deg deg ah, sida Ciise qudhiisa codsaday jawaab naga ah qaab of iimaanka isaga. Si kastaba ha noqotee, sida uu ina baray, xukunkiisii ​​weli ma uusan bilaaban si buuxda. Marka hore, waa inay noqotaa mid dhab ah. Oo waxay la noqon doontaa soo laabashada Masiixa (badanaa loo yaqaan 'imaatinkiisa labaad').
Rumaysadka Boqortooyada Eebbe haddaba sidaas darteed si aan kala sooc lahayn ayay xidhiidh ula leedahay rajada ay si buuxda u rumeysan tahay. Horeyba way ugujiraan ciise waxayna kusii ahaatay Ruuxa Quduuska ah. Laakiin kaamilnimadiisu wali way imaanaysaa. Tan waxaa badanaa lagu muujiyaa marka la yiraahdo Boqortooyada Ilaah horeba way u jirtay, laakiin aan wali loo dhammaystirin. Shaqooyinka George Ladd si taxaddar leh u baadhay wuxuu ka dhaadhicinayaa aragtidan aragtida Masiixiyiin fara badan oo cibaadaysan, ugu yaraan adduunka ku hadla Ingiriisiga.
Boqortooyada Ilaahay iyo labada da 'da
Marka loo eego fahanka kitaabiga ah, kala soocid cad ayaa la sameeyay inta udhaxeysa laba jeer, laba da 'ama kalimooyin: waqtiga "sharka adduunka waqtiga" iyo waxa loogu yeero "waqtiga adduunka soo socda". Halkan iyo hadda waxaan ku nool nahay "waqtiga adduunka sharka" ee hadda. Waxaan ku nool nahay rajo ah “waqtiga adduunka soo socda, laakiin weli ma aanan la kulmin. Sida muuqata, waxaan wali ku nool nahay waqtigan xaadirka ah - waqtigaas. Qorniinka si cad u taageeraya aragtidan waa sida soo socota (Haddii aan si kale loo sheegin, xigashooyinka Baybalka soo socda waxay ka yimaaddaan Baybalka Zurich.):
Wuxuu u oggolaaday in xoogani ku shaqeeyo Masiixa markii uu kuwii dhintay ka sara kiciyey oo uu jannada xagga midigtiisa geliyay. Isaga oo ka sarreeya wax kasta, amar kasta, amar kasta iyo amar kasta iyo magac kasta, oo aan taas ku jirin oo keliya, laakiin sidoo kale wakhtiga soo socda adduunka waxaa loo yaqaan " (Efesos 1,20: 21).
Nimco ha idinla jirto iyo nabad ka timaada Ilaaha Aabbeheen ah iyo Rabbi Ciise Masiix kan naftiisuu isu bixiyey dembiyadeenna aawadood inuu naga kaxeeyo dunidan sharka ah sida ay tahay doonista Aabbaha Ilaaheenna ah. (Galatiya 1,3: 4).
Runtii waxaan idinku leeyahay, Ma jiro qof gurigiisa ama afadiisa uga tegey, walaalihiis, waalidkiis ama carruurtoodii boqortooyadii Ilaah aawadeed, oo aan mar dambe helin qiimo aad u badan (horeyba) waqtigaan, iyo nolosha weligeed ah mustaqbalka adduunka mustaqbalka ” (Luukos 18,29: 30; Baybalka-dadku).
"Waxay noqon doontaa isku mid dhamaadka adduunka. Malaa'igahu way soo bixi doonaan oo rag xunxunna way ka soocmi doonaan kuwa xaqa ah." (Matayos 13,49; Kitaabka Quduuska ah).
"[Qaar ayaa dhadhamiyey ereyga Ilaah wanaagsan iyo awoodaha dunida iman doona" (Cibraaniyada 6,5).
Fahmitaankaan mugdiga leh ee da'da ama hirarka ayaan nasiib darro si cad loogu qeexin sababta oo ah erayga Giriigga ee "da'da" (aion) waxaa loo tarjumay qaabab kala duwan, sida "daa'in", "adduun", "weligiis", iyo "waqti dheer kahor". Tarjumaadani waxay isbarbar dhigayaan waqtiga aan dhamaadka lahayn, ama dhulkan dunidan mid jannada mustaqbalka ah. In kasta oo kala duwanaanshaha ku meelgaarka ah iyo kan duruuftu ay mar horeba kujiraan fikirka da 'kala duwan ama xilliyadii kala duwanaa, wuxuu si gaar ah diiradda u saarayaa isbarbardhiga fog ee qaababka nolosha ee tayada leh hadda iyo mustaqbalka.
Waxaan ka akhrinaa tarjumaadaha qaarkood in miraha ku soo baxa carrada qaar ay ka go'an yihiin burooyinka "walwalka dunidan" (Mark 4,19). Laakiin maadaama ay Aion-ka Giriiggu ku qoran yahay qoraaladii asalka ahaa, waa inaan sidoo kale adeegsannaa macnaha “ku dhex jira biqilka walaacyada adduunkan sharka leh ee waqtigan jira”. Sidoo kale Rooma 12,2, halkaas oo aan aqrinayno inaynaan ku habboonayn qorshaha adduunkan ', tanna sidoo kale waa in loo fahmaa qaab sidaas oo ay tahay inaanan ku midoobin tan' waqtiga adduun 'hadda.
Erayada lagu soo saaray “nolosha weligeed ah” sidoo kale waxay tilmaamaysaa nolosha mustaqbalka. Tani waxay ku caddahay Injiilka Luukos 18,29, 30 sida kor lagu soo sheegay. Nolosha daa'imka ahi waa "had iyo jeer inta lagu gudajiro", laakiin way ka badantahay muddada, taas oo aad uga dheer marka loo barbar dhigo wakhtigan sharka ah ee waqtigan la joogo! Noloshu waa mid iska leh marxalad ama geedo kala duwan. Farqigu maaha kaliya muddada gaaban marka la barbar dhigo nolosha aan xad dhaafka ahayn, laakiin waa inta u dhexeysa nolosha waqtigan xaadirka ah ee weli lagu garto dembiga - sharka, dembiga iyo dhimashada - iyo nolosha mustaqbalka, taas oo raad kasta lagu haray. sharka waa laga baabi'in doonaa. Waqtiga soo socda waxaa jiri doona samad cusub iyo dhul cusub oo xiri doona xiriir cusub. Waxay noqon doontaa nooc gebi ahaanba nooc tayo leh oo tayo leh, waana jidka nolosha Eebbe.
Boqortooyada Ilaah waxay ugu dambeyntii la mid tahay waqtiga soo socda adduunka, nolosha weligeed ah iyo soo laabashada Masiixa. Ilaa inta uu ka noqonayo, waxaan ku nool nahay waqtigan adduunyada sharka leh waxaan rajeyneynaa mustaqbal. Waxaan sii wadnaa inaan ku noolaano adduun dembi leh, in kasta oo Masiixu sarakiciddiisa iyo koraantiisa, wax aan kaamil ahayn, ay yihiin wax walbaa waa suuxdin.
Waxa la yaab leh, in kasta oo aynnu sii wadno nolosha waqtigan xun, anagoo mahadnaqna leh nimcadii Eebbe aawadeed, waxaan mar hore qayb ahaan ku arki karnaa boqortooyada Ilaah. Qaab ahaan waa la joogayaa halkan iyo hadda kahor ka hor go'itaanka da'da sharka ah ee hadda jira.
Ka soo horjeedda fikradaha oo dhan, boqortooyada mustaqbalka ee Ilaah ayaa jabtay xilligan iyada oo aan xukunkii ugu dambeeya iyo dhamaadka wakhtigan la gaadhin. Boqortooyada Eebbe waxay ku ridi doonta hadhkeeda halkan iyo hadda. Waxaan ka helnaa dhadhan. Barakooyinkiisa qaarkood ayaa nooga imanaya halkan iyo hadda. Annaguna waan kaqeyb qaadan karnaa halkan iyo hada anagoo ilaalinayna xiriirka Masiix, xittaa hadii aan wali waqtigan ku dhegan nahay. Tani waa suurtagal maxaa yeelay Wiilka Ilaah wuxuu dunida u yimid, oo dhammaystiray hawshiisii, oo wuxuu noo soo diray Ruuxiisa Quduuska ah, in kastoo uusan haddana ahayn jidhka. Waxaan hadda ku raaxeysanahay midhihii ugu horreeyay ee boqornimadiisii ​​guusha. Laakiin ka hor soo laabashada Masiixu waxay noqon doontaa muddo ku meel gaadh ah (ama "wakhti dhamaadka nasashada", sida TF Torrance loo yaqaanay), kaas oo dadaallada badbaadinta Ilaahay ay wali ku guuleysan doonaan inta lagu jiro waqtigan.
Ku dhisida ereyada erayada ee Qorniinka, culimada Baybalka iyo fiqiga ayaa adeegsaday ereyo badan oo kaladuwan si ay uga dhigaan xaaladdan cakiran. George Ladd kadib, inbadan ayaa iftiimiyay qodobkaan muranka dhaliyay iyagoo sheegaya in boqortooyadii Ilaah ee Ciise la fuliyay, laakiin ma dhici doono ilaa inta uu ka noqonayo. Boqortooyada Ilaah waa horay jirtay, laakiin weli lama dhammaystirin. Dhaqdhaqaaqan firfircoon sidoo kale waxaa lagu sheegi karaa qaab ay Boqortooyada Ilaah horay loogu soo bandhigay, laakiin waxaan sugeynaa in la dhammeeyo. Muuqaalkan waxaa mararka qaar loo yaqaanaa "imika-nafsiga hadda jira". Thanks nimcada Ilaah, mustaqbalku mar hore ayuu soo galay xilligan xaadirka ah.
Tani waxay saamayneysaa in runta oo dhan iyo xaqiiqada waxa Masiixu sameeyay ay tahay mid asal ahaan laga goynayo fahanka, maadaama aan wali ku hoos nool nahay shuruudihii uu dejiyay. Dunida sharka leh, boqornimadii Masiixu mar hore waa run, laakiin waa mid qarsoon. Mustaqbalka, Boqortooyada Eebbe si buuxda ayaa loo dhammaystiri doonaa maxaa yeelay cawaaqib xumadii ka hartay xilliga dayrta waa la tirtiri doonaa. Saamaynta buuxda ee shaqada Masiixa ayaa markaa ka dib lagu muujin doonaa sharafta oo dhan meel kasta. 2 Kala duwanaanshaha halkan lagu sameeyay wuxuu udhaxeeyaa qarsoon oo aan wali si buuxda u dhicin boqortooyadii Eebbe ee ma aha mid udhaxeysa hadda muuqata iyo mida muuqata.
Ruuxa Quduuska ah iyo labada da 'da'
Aragtida boqortooyada Eebbe waxay la mid tahay tan lagu muujiyey Qorniinka shakhsiga iyo shaqada Ruuxa Quduuska ah. Ciise wuxuu ballanqaaday imaatinka Ruuxa Quduuska ah wuxuuna u soo diray isaga iyo Aabbaha inuu inala jiri doono. Isaga ayuu ku neefsaday Ruuxiisa Quduuska ah xertii, oo maalintii Bentakostiga ayuu ku soo degay rumaystayaashii isu soo ururay. Ruuxa Quduuska ahi wuxuu awood u siiyay kaniisadihii hore ee Masiixiga inay si run ah ugu marag kacaan shaqada Masiixa isla markaana ay u suurtogeliyaan kuwa kale inay jidka u galaan boqortooyada Masiixa. Oo wuxuu dadka Ilaah u soo diraa dunida si ay ugu wacdiyaan injiilka Wiilka Ilaah. Waxaan nahay qayb ka mid ah himilada Ruuxa Quduuska ah. Si kastaba ha noqotee, wali si buuxda ugama warqabin waxaan rajeyneynaa in maalin uun sidan noqon doonto. Bawlos wuxuu tilmaamay in maanta khibradda adduunyadu ay tahay bilow. Wuxuu adeegsadaa sawirka hormaris, ballan qaad ama debaaji (arrabon) si loo gudbiyo fikradda qeybinta horudhaca qayb ka mid ah oo u adeegta amniga si loo gaarsiiyo dhammaystiran (2 Korintos 1,22:5,5;). Sawirka dhaxalka loo adeegsaday Axdiga Cusub dhexdiisa sidoo kale waxay cadeyneysaa in waqtigan nalagu siiyay wax aan halkan joogno oo aan hadda hubno inaan mustaqbalka sii badnaan doono. Akhri ereyada Bawlos:
"Isaga [Masiix] waxaa sidoo kale laynaga dhaxlay kuwa dhaxalka leh ee loo xukumay inay sidaas yeelaan ulajeeddada qofkasta oo ku shaqeeya doonista doonistiisa [...] taas oo ah ballan qaadkii dhaxalkeenna, xagga badbaadadeenna aannu hantidiisu waxay noqon doontaa ammaanta sharaftiisa [...] Oo wuxuu ku siin lahaa indhaha iftiimin ee qalbigaaga si aad u aragto rajada uu kuugu yeedhay, sida ammaanta hodanka uu dhaxalka u lahaa quduusiinta " (Efesos 1,11:14,18;).
Bawlos sidoo kale wuxuu adeegsanayaa sawirka, kaas oo aan hadda ku helno oo keliya "midhaha ugu horreeya" ee Ruuxa Quduuska ah, laakiin ma aha buuxintiisa. Waxaan hadda la kulannaa bilowga goosashada oo wali ma wada ahan hadiyadeedii (Rooma 8,23). Muuqaal kale oo muhiim ah oo kitaabiga ah ayaa ah "dhadhaminta" hadiyadda mustaqbalka (Cibraaniyada 6,4: 5). Waraaqkiisii ​​ugu horreeyay, Butros wuxuu soo urursaday qaybo badan oo halxilaab ah ka dibna wuxuu wax ka qoraa kuwa uu ku caddeeyey Ruuxa Quduuska ah:
"Mahad waxaa leh Ilaaha ah Aabbaha Rabbigeenna Ciise Masiix, kaasoo dib noogu soo nooleeyey naxariistiisa badan ka dib rajadiisa nool ee sarakicidda Ciise Masiix ee kuwii dhintay, dhaxalka aan dhimanayn oo weligeed ah oo weligeed ah oo jannada lagu hayo. inaad ka badbaaddeen xoogga Ilaah xagga rumaysadka aad ku farxdaan oo farxad u diyaarsan in wakhtiga ugu dambaysta la muujiyo ” (1. Pt 1,3-5).
Sida aan hadda ku aragnay Ruuxa Quduuska ah, muhiimad weyn ayey noo leedahay, xitaa haddaanan weli si buuxda uga warqabin. Sida aan hadda ku soo aragnay shaqadiisa, waxay tilmaamaysaa horumar aad u weyn oo maalin uun dhici doona. Sida aan u aragno isaga waxay kobcineysaa rajo aan rajo xumeyn doonin.
Waqtigan xaadirka ah ee dunida sharka leh
Xaqiiqada ah in aan hadda ku noolnahay adduunka sharka leh ee la rajeynayo waa shay muhiim ah. Shaqada dunida ee Masiixa, in kasta oo si guul leh loogu dhammeystiray, weli ma uusan tirtirin dhammaan wixii ka dambeeyay iyo cawaaqibkii dhicitaankii xilligan ama xiisaha. Marka waa inaan filaynaa in la tirtirayo ilaa Ciise soo noqonayo. Markhaatiga uu Axdiga Cusubi ku leeyahay dabiicadda dembiga ee cosmos-ka sii socda (oo ay kujirto bini-aadamku) kama sii yarayn karay. Salaadiisii ​​wadaadnimadiisa sare, oo aan ku akhrinay Injiilka Yooxanaa 17, Ciise wuxuu ku duceysanayaa inaan laga dhaafin xaaladda aan ku jirno, inkasta oo uu ogyahay inay tahay inaan u adkeysano silica, diidmada iyo cadaadiska waqtigan. Khudbaddiisii ​​buurta ayuu ku tilmamay inaynaan weli helin dhammaan hadiyadihii nimcadda ee Boqortooyada Ilaahay ina siisay halkan iyo hadda, iyo in gaajadayada iyo harraaddeenna caddaaladda aynaan weli qancin. Hase yeeshe, waxaan la kulmi doonnaa cadaadis muujinaya isaga. Wuxuu sidoo kale si cad u tilmaamay in himiladeenna la fulin doono, laakiin waqtiga soo socda oo keliya.
Rasuul Bawlos wuxuu tilmaamay in nolosheenna runta ahi aanu isu muujinayn sidii buug fur furan, laakiin ay tahay “oo Masiixa lagu qariyey Ilaah” (Kolosay 3,3). Wuxuu sharraxayaa inaynu nahay tusaale ahaan weel dhoobo ah oo sita ammaanta jiritaanka Masiixa dhexdeeda, laakiin aan weli lagu muujin sharaftooda (2 Korintos 4,7), laakiin hal maalin oo keliya (Kolosay 3,4). Bawlos wuxuu tilmaamay in "nuxurka adduunku uu dhammaado" (Kolosay 7,31; cf. 1 Yooxanaa 2,8; 17) in aysan wali gaarin hadafkeedii ugu dambeeyay. Qoraa warqadda ee Cibraaniyada wuxuu si ikhtiyaar ah u qirtay in ilaa hadda aan wax walba laga raacin Masiixa iyo waxa u gaarka ah (Cibraaniyada 2,8: 9), xitaa haddii Masiixu adduunka ka adkaaday (Yooxanaa 16,33).
Waraaq uu u diray kaniisadda Rome, ayuu Bawlos sharaxayaa sida dhammaan abuurku “u barooranayaan oo u baqayo” iyo sida “annaga qudheena, oo ah ruuxa hadiyadda ugu horreeya, aannu iska taahno nafteenna oo u baahan nahay carruurnimada, Jidh ” (Rooma 8,22-23). In kasta oo Masiixu dhammaystiray shaqadiisii ​​adduun, joogitaankeenna weli ma muujinayo dhammaystirkiisii ​​boqornimadii guusha. Waxaan ku sii jirnaa waqtigan xun. Boqortooyada Ilaah waa joogtaa, laakiin weli ma aha mid kaamil ah. Arrinta xigta, waxaan eegi doonaa nooca rajadeenna ah dhammaystirka soo socda ee boqortooyada Ilaah iyo dhammaystirka ballanqaadyada kitaabiga ah.
1 Cibraaniyada 2,16:8,9 waxaan ka helnaa ereyga Giriigga epilambanetai, kaas oo sida ugu wanaagsan loogu tilmaamay "aqbal" oo aan ahayn "caawin" ama "ka welwel". Cibraaniyada Cibraaniyada, halkaas oo isla ereyga loo adeegsaday xoreynta Ilaah ee reer binu Israa'iil xorayntii addoonsiga Masar.
2 Ereyga Griigga ee loogu adeegsaday tan dhexdeeda Axdiga Cusub dhexdiisa, oo markale lagu nuuxnuuxsaday magacaabista buugiisii ​​ugu dambeeyay, waa apocalypsis. Waxay noqon kartaa "muujinta",
“Soo dejinta” iyo “imaatinka” ayaa la tarjumay.
Boqortooyada Ilaah (Qaybta 2aad)